अहिलेसम्म नेपाली व्याकरण लेखनको परम्परा फोस्रो ढुटो मात्र हो : प्राडा माधवप्रसाद पोखरेल – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated Apr 21, 2019 22 0
तेस्रो ठेली चाहिँ नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्यको इतिहास छ । त्यसमा दार्जिलिङ, सिक्किम, डुबर्सलगायत संसारभर छरिएर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यलाई समेटिनेछ । तुलनात्मक रूपमा नेपाल बाहिर भनेपछि भारतलाई बढी बुझिन्छ किनभने नेपाली साहित्यको पीएचडीसम्मको अध्ययन अध्यपन सिक्किम युनिभर्सिटी, बीएचयू, असमलगायतमा छ । चौथो ठेली नेपाली पद्य र नाटकको इतिहास छ । पाँचौँ ठेली नेपाली गद्यको इतिहास छ । यी पाँचवटा ठेलीको यो परियोजना हो
अर्को कार्य, अहिले म पाश्चात्य समालोचना पुस्तक लेखिरहेको छु । त्यसमा १०, १२ वटा अध्याय छन् । त्यसका ९, १० वटा लेख त लेखिसकेको छु । २, ३ वटा लेख्न बाँकी छ । यस समालोचनामा सिद्धान्त, इतिहास र प्रक्रियालाई समेटेको छु । यस्तो खालको पाश्चात्य साहित्यको समालोचना नेपालीमा लेखिएकै छैन भन्ने ठान्छु । मक्र्सवादी समालोचनाको अध्ययन गरिसकेको छु । त्यसको लेखनकार्य बाँकी छ । अनि उत्तरआधुनिकवाद लेख्न बाँकी छ । यति लेखेपछि यो पनि सकिन्छ ।नेपाली भाषाको अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको पहिलो व्याकरण भनेको बल्लभमणि दाहालको थेसिस हो । दुर्भाग्यवस त्यसको नेपाली अनुवाद कसैले गरेन । दाहाल सरले आफै पनि गर्नु भएन, अरू कुनै चेलाहरूले पनि गरेनन् । यो थेसिस नेपालीमा अनुवाद गरिदिएदेखि सक्कली नेपाली व्याकरण त्यहाँ भेटिन्छ ।
व्याकरणको विकासका सम्बन्धमा संसारमा प्रायः एउटै प्रवृत्ति देखिएको छ । ल्याटिन व्याकरण पनि त्यही नेस्फिल्डको व्याकरणमा आधारित छ । ल्याटिन भाषाको व्याकरण हेर्यो, त्यसैका आधारमा आफ्ना भाषामा कपी बनायो । पार्टस अफ स्पिच कति किसिमका छन् भन्दा ८ किसिमका छन्– नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिभ, भर्व, एड्भर्व, प्रिपोजिसन, इन्टरोगेसन…. अनि तिनै आठ किसिम नेपाली व्याकरणमा पनि छन् । नाम पाँच किसिमका भन्यो, त्यही कपी आएको छ । त्यही पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग भन्यो । सबै व्याकरणमा त्यही ल्याटिन भाषाको व्याकरणको धारणा भेटिन्छ । त्यसैको अनुकरण गरेर अङ्ग्रेजीमा पनि व्याकरण बनाए । त्यो नै हिन्दी भाषाको व्याकरण हुँदै नेपाली भाषामा आएको छ । त्यसैले नेपाली भाषाको अनुसन्धान गरेपछि मैले के देखेँ भने अहिलेसम्म नेपाली भाषाको व्याकरण लेखेनको परम्परा भनेको फोस्रो ढुटो मात्र रहेछ । वास्तविक अनुसन्धान गरेर नेपाली भाषाको व्याकरण नै लेखिएको रहेनछ ।
अहिलेसम्म नेपालीमा ८ किसिमका विभक्ति भनिएको छ । प्रथमा, द्वितीय, तृतीया …. विभक्ति भन्दै सबैले आआफ्ना व्याकरणमा लेखेका छन् । सबै हौवाका भरमा लेखेका छन् । नेपाली भाषामा तृतीया विभक्ति कहाँ छ ? त्यो त आधारभूत रूपमा पाणिनीको सिद्धान्त हो । संस्कृतमा वैज्ञानिक व्याकरण छ । संस्कृतको हुबहु मिल्ने भए त्यही व्याकरण नेपालीमा लेख्दा हुन्थ्यो नि । तर नेपाली भाषा भिन्नै हो । नेपालीमा प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति भनिएको छ । केको प्रथमा ? उही ‘ले’ छ । उही ‘लाई’ छ । केको त्यस्तो हुन्छ नेपालीमा ? संस्कृतमा पो ‘रामं’ भन्यो भने द्वितीया ‘रामाय’ भन्यो भने चतुर्थी हुन्छ । ‘रामं’को म र ‘रामाय’को य फरक फरक छ र द्वितीया र चतुर्थी भयो । नेपालीमा चाहिँ रामलाई, रामलाई द्वितीया र चतुर्थी भन्न मनलागे अनुसार भन्ने गरिन्छ । रामलाई सामान दियो भने चतुर्थी, रामलाई मैले कुटेँ भने भने द्वितीया हुने रे ! यस्ता तरिकाले पनि विभक्ति हुन्छ । त्यसैले प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति नेपाली चिजै होइनन् । संस्कृतको माल ल्यायो खोटो बानाएर । मेरो ‘वाक्य व्याकरण’मा यसबारे विस्तृत लेखेको छु । त्यसमा विभक्ति नियम लेखिएको छ ।हाम्रै देवनागरी लिपि पनि आधारभूत रूपमा ब्राह्मी लिपिबाट विकसित भएको हो । ब्राह्मी लिपि पनि आरामाहिक लिपिबाट विकसित भएको हो । आरामाहिक लिपि भनेको सेमेटाइक भाषा, अरबी भाषा लेख्न प्रयोग गर्ने चिन्ह हो । त्यसैले लिपि भनेको देवनागरी लिपि नै पो कहाँ जन्मजात लगेर शिवजी, महादेवको वरप्रसादबाट लिपि आएको हो र ?
अर्को, पाणिनीको व्याकरणमा विभक्ति चाहिँ प्रत्ययको नाम मात्रै हो । रामः विसर्ग रामं अं भयो, रामेण, एण भयो, रामाय, रामात्, रामास्य, रामे… भन्यो भने यी पो विभक्ति हुन्– शब्दबाट जसलाई छुट्याउनै सकिँदैन । त्यस्तो चाहिँ नपत्याउने, अनि नेपालीको ‘केटाले’ भन्दा ‘ले’ त बेग्लै शब्द हो । रामले, रामको भन्यो भने ‘ले’ र ‘को’ बेग्लै शब्द हुन् किनभने त्यो ‘को’मा चाहिँ विभक्ति हो भने त्यसमा विभक्ति र अर्को शब्द छिराउन सकिँदैन । विभक्तिका बीचमा केही राख्न सकिँदैन तर ‘रामको’ भने पनि ‘राम विचाराको’ भनेपछि ‘को’ त सरेर विचराभन्दा पर्तिर पुग्यो । कहाँ ‘को’ विभक्ति हुन्छ ? ‘को’ भनेको बेग्लै स्वतन्त्र शब्द हो । तर नेपालीमा यो विभक्ति हो, यो प्रत्यय हो । ‘देखि’, ‘बाट’ सबै प्रत्यय हुन् भन्ने भ्रम सिर्जना गरियो । यसले गर्दा पदयोगको झ्याउलो थपिएको छ । व्याकरणका यी सम्पूर्ण कुराहरूसँग यस्तो होइन भनेर युद्ध गर्नु, सारा ठूलो त्यो बहुमत, त्यो परम्परा, त्यो रुढीका समर्थनमा भएका बेलामा यो होइन भनेर विरोध गर्नु जस्तो ठूलो हाँक अर्को केही होइन । नेपाली व्याकरण मानक स्थापना गर्नको चुनौती यो हो ।
हाम्रै देवनागरी लिपि पनि आधारभूत रूपमा ब्राह्मी लिपिबाट विकसित भएको हो । ब्राह्मी लिपि पनि आरामाइक लिपिबाट विकसित भएको हो । आरामाइक लिपि भनेको सेमेटिक भाषा, अरबी भाषा लेख्न प्रयोग गर्ने चिन्ह हो । त्यसैले लिपि भनेको देवनागरी लिपि नै पो कहाँ जन्मजात लगेर शिवजी, महादेवको वरप्रसादबाट लिपि आएको हो र ? त्यसैले गर्दा अइउणऋलृक, हयवरटलण भनेर जुन संस्कृतमा महेशरा आगतानी माहेश्वराणी हैन, माहेशसूत्राणी भनेर भन्ने जुन सूत्र छ, त्यो चाहिँ शिवजीका डमरुबाट आएको आवाजबाट भएको भन्नेछ । डमरुबाट त वर्णहरू निस्कने होइनन् । मानिसका ओठ, जिब्रा, कण्ठ आदिबाट निस्कने कुरा हो । कुनै पनि भाषाको वास्तविक भौतिक चिजलाई लगेर मिथकीय बनाउँदाखेरी स्वाद लिन्छन् यो भारतीय महाद्वीपका पण्डितहरू । त्यही प्रवृत्तिले मात्रै हो महेश्वरा जागतानी, माहेश्वराणी… भन्या हो । वास्तवमा त मान्छेले उच्चारण गर्दा अर्थमा फरक पार्ने उच्चारण भेद मात्र वर्ण हो ।वर्ण भनेको नै व्यतिरेकी ध्वनिहरू (उच्चारणले अर्थमा ल्याउने फरक÷भेद) हुन् । नेपाली भाषाका वर्णहरू लघुतम युग्मबाट सिद्ध भइसकेको छ । त्योभन्दा बाहेक अन्य उच्चारणले फरक पार्ने उच्चारण भेद छैन भनेपछि त वर्ण त्यति मात्र हुन् । त्यसैले नेपाली भाषाका वर्ण ४० वटा मात्रै हुन् ।
खासगरी आगन्तुक शब्दहरूको नेपालीकरण गर्ने जुन नियम पछाडि बन्यो यसको प्रयास केही अघि पनि भएका थियो । साझा प्रकाशनले २०२५ सालतिर पनि प्रयास गरेको थियो । बालकृष्ण पोखरेलले भाषाशास्त्रमा एमए पास गरेर फर्केर आएपछि नेपाली भाषामा आगन्तुक शब्दको नेपालीकरण गर्ने कार्य गरे । त्यो झर्रोवादीहरूले २०१३ सालमै नौलो पाइलोमार्फत सुरु गरेका थिए । त्यो कुरो नै फैलिएर आयो । त्योबेला बालकृष्ण पोखरेल त्रिविमा एमएलाई पढाउँथे, पछि छोडेर पनि गए । त्यहीबेला लगभग २६ सालतिर एउटा गोष्ठी गरे । त्यस गोष्ठीमा आगन्तुक शब्दको नेपालीकरण गर्ने प्रयास पनि गरे । त्यो प्रयासमा त्यसबेलाका भाषासम्बधी चासो राख्नेहरूले विथोले भन्छन्, तारानाथ शर्मा भाँडे भन्छन् । तर त्यसबेला सफल भएन ।शब्दकोशको हिज्जेको विरोधमा हिँडेका छन् ती दुई जनालाई एउटा प्याराग्राफ लेख्न लगाउने हो भने कसैको एकअर्कामा मिल्दैन ।
शब्दकोश भनेको पाठकका लागि हो, कुनै लहडी शब्दकोशकारका लागि होइन । पाठकले आफूले खोजेको शब्दको अर्थ त्यो शब्दकोशमा खोज्ने हो । शहर खोज्दा त्यसका विकल्प दन्त्य ‘स’ सहर र तालव्य ‘श’ शहर पनि थियो । त्यस्तै लहडीहरूले २०५८ सालमा परिमार्जन हुँदा त्यो विकल्प हटाइदिए । तालव्य शहर झिकिदिए । दीर्घ गरीब झिकिदिए । किताबहरूमा तालव्य शहर छ, शब्दकोशमा छैन । शब्दकोश त नेपाली जान्नेका लागि नभई नजान्नेका लागि हो नि । एउटा विदेशीले तालव्य हेर्छ । नेपाली बृहत् शब्दकोश पल्टाउँछ, त्यो शब्दै छैन । दन्ते सहर छ । दन्ते सहरलाई तालव्य श कसरी खोज्छ ? त्यहाँ समस्या छ । त्यो पाठकलाई निराश बनाउने र भइरहेका पुराना किताब र पत्रपत्रिकामा छापिएका किताबहरूमा भएका शब्दका हिज्जेहरूका अर्थ नभेटिने बनाए ।२०५८ मा नेपाली बृहत् शब्दकोशमा विकल्प हटाइयो, त्यो चाहिँ ठूलो दुर्घटना हो । विरोध त्यो बेला गर्नुपथ्र्यो । ५८ देखि ६९ सालसम्म ११ वर्ष नेपालीका पण्डितहरू कहाँ गए ? त्यो नेपाली केन्द्रीय विभाग कहाँ गयो ? तिनीहरूले कहिल्यै विरोध गरेनन् । अनि आएर हेमाङ्गराज अधिकारी प्रज्ञामा हुँदाको २०७२ सालको शब्दकोश खारेज गर्ने भने । २०७२ सालमा आएर ठूलो तारा खसेर चकनाचूर भएर यसको विरोध भएको होइन ।
तीन महिनापछि मैदानमा आउने भए नेइमार